Weerar lagu qaadey Ciidamo Ajnabi ah oo ku sugan Hiiraan | Keydmedia
Weerar lagu qaadey Ciidamo Ajnabi ah oo ku sugan Hiiraan
Dadka degaanka ayaa sheegay in dhowr madfac ay ku dhaceen xaafado dad shacab ah ay ku nool yihiin, iyadoo ay geysteen khasaarooyin kala duwan.
BELEDWEYNE, Soomaaliya - Kooxda Al-Shabaab ayaa xalay weerar gaadmo ah ku qaaday saldhiga Ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin degaanka Halgan, oo ku dhaw magaaladda Beledweyne, ee xarunta gobolka Hiiraan oo ku taalla bartamaha dalka Soomaaliya.
Ciidamada ayaa iska-caabiyay weerarka oo ahaa mid culus, oo markii dambe isku bedelay dagaal fool-ka-fool ah oo mudo ku dhaw hal saac socday, sida ay Keydmedia Online u xaqiijiyeen dadka degaanka. Khasaarooyiin kala duwan ayaa ka dhashay dagaalka, balse lama oga tirada rasmiga ah.
Waa weerarkii labaad oo todobaad gudihiisa ay Al-Shabaab ku beegsato saldhiga Halgan, oo 3 sano kahor laga qabsaday, waxaana soconaya howlgallo Ciidan oo lagu xoreynayo dhamaan degaanka gobolka Hiiraan kaga sugan yihiin Argagaxisadda.
Al-Shabaab ayaa go'doomin ku haysa degmooyinkii laga saaray ee gobolka, oo aan isku gudbi karin, waxaana arintaasi sababtay sicir barar iyo dhibaatooyin dhaqaale, iyadoo dad badan ay awoodi waayeen inay wadooyinka ku safraan, sababo amni.